Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Cofa apha ukuba le ngxelo yakho! » Ukukhumbula okutsha kokutya: I-Charcuterie Fortin brand Salami
UCharcuterie L. Fortin Ltée. ukhumbula iCharcuterie Fortin brand Salami kwindawo yentengiso kuba isenokuba nengqolowa engachazwanga kwileyibhile. Abantu abanokwaliwa yingqolowa okanye abanesifo se-celiac okanye ezinye iziphazamiso ezinxulumene ne-gluten akufuneki batye imveliso ekhunjulweyo echazwe ngezantsi.
Le mveliso ilandelayo ithengiswe eQuebec.
uhlobo imveliso ubungakanani UPC Codes
UCharcuterie Fortin Salami 175 g 6 28555 04100 4 Igqibelele ngaphambi ko
Into ekufuneka uyenzile
Jonga ukuze ubone ukuba unayo imveliso ebuyisiweyo ekhayeni lakho. Iimveliso ezikhunjulwayo kufuneka zilahlwe ngaphandle okanye zibuyiselwe kwivenkile apho zithengwe khona.
Ukuba unokwaliwa yingqolowa okanye unesifo se-celiac okanye ezinye iziphazamiso ezinxulumene ne-gluten, ungatyi imveliso ekhunjulweyo njengoko inokubangela ukusabela okunzulu okanye okusongela ubomi.
• Funda ngakumbi malunga nokwaliwa kukutya okuqhelekileyo
• Bhalisela ukukhumbula izaziso nge-imeyile kwaye usilandele kwimidiya yoluntu
• Jonga inkcazo yethu eneenkcukacha zophando ngokhuseleko lokutya kunye nenkqubo yokukhumbula
• Xela ukhuseleko lokutya okanye iilebhile
Oku kukhunjulwa kwavuselelwa yinkampani. I-Arhente yoHlolo lokuTya yaseKhanada (CFIA) iqhuba uphando lokhuseleko lokutya, olunokukhokelela ekukhunjulweni kwezinye iimveliso. Ukuba ezinye iimveliso ezinobungozi obuphezulu ziyakhunjulwa, i-CFIA iya kwazisa uluntu ngokuhlaziywa kweZilumkiso zokuKhumbula ukutya.
I-CFIA iqinisekisa ukuba ishishini liyayisusa imveliso ekhunjulwayo kwindawo yentengiso.
Akukho zimpendulo zixeliweyo ezinxulumene nokusetyenziswa kwale mveliso.